Akhriso:-Mukhtaar Roobow oo wada hadal kula jira Villa Soomaaliya | allsaaxo online
Akhriso:-Mukhtaar Roobow oo wada hadal kula jira Villa Soomaaliya
Wararka ka imaanaya Muqdisho ayaa sheegaya in Villa Soomaaliya ay wada hadal dib ula furtay Mukhtaar Roobow ,kaas oo ay durba soo baxday saameyntiisa deegaanka.
Shacabka gobalka Baay ayaa muujiyay sida ay u rabaan Mukhtaar Roobow waxaana laga cabsi qaba in hadii doorashada loogaga adkaado uu natiijada aqbali waayo. Waa musharaxa qura ee heysta hub iyo ciidan u gaar ah oo ku sugan Xudur.
Roobow iyo musaraxiinta kale marka laga reebo Lafta Gareen ayaa la sheegay iney midoobeen oo ay ku heshiiyeen iney iska diidaan rabitaanka Villa Soomaaliya taas oo walaac durba abuurtay.
Xildhibaano kasoo jeeda Koonfur Galbeed ayaa u kala daba qaadaya labada dhinac waxaana ay madaxtooyadu dooneysa inuu noqdo mid ay dhaqaale siiyaan oo hadii uu sooo baxana wada shaqeyaan. Marnaba Villa Soomaaliya diyaar uma ahan iney ka tanaasusho Lafta Gareen sidaa darteed wa dooq labaad Roobow.
Arrintaan waxaa la sheegay inuu Farmaajo doonaayo, isagoo tiro labo jeer ah la hadlay Roobow saacadihii lasoo dhaafay balse lama hubo iney arrintaan ku raaci doonan Kheyre iyo Fahad Yasin oo ah labo ka mid ah raga ay taladu ka go’ado.
Dad ku dhow dhow Mukhtaar Roobow ayaa u sheegay Allsaaxo Online in wadaadku uusan wali aqbalin damaca Villa Soomaliya, madaama ay horrey uga baxeen balankii la wada galay.
17ka bishaan ayaa la filaya iney Koonfur Galbeed ka dhacdo doorasho madaxweyne xili uu shalay is casilay Shariif Xasan, kaas oo la sheegay inuu $4milion oo dollar ka qaatay madaxtooyada Soomaaliya.